Topic: Real Estate အိမ်ခြံမြေ
ငါကြိုတင်ငွေချေးငွေကိုအချိန်မီကြိုတင်ပေးသင့်သလား အကျိုးခံစားခွင့်မရှိပါ၊ စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုးနှုန်းကိုသင်ပေးချေလိမ့်မည်၊ သို့သော်ဘဏ်တစ်ခုချင်းစီသည်အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးခံစားခွင့်များပေးနိုင်သော်လည်း၊
အခန်းတစ်ခန်းဝယ်တဲ့အခါသားဖွားအရင်းအနှီးကိုသုံးလို့ရမလား။ မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲ အပေါင်ပစ္စည်းချေးငွေကိုပြန်ဆပ်ရန်သားဖွားအရင်းအနှီးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကန့်သတ်ထားသောဘဏ်အရေအတွက်သည်အခန်းများငှားရမ်းနေကြသည်။ အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ရန် ...
“ အရစ်ကျဖြင့်တိုက်ခန်း” ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
“ အရစ်ကျဖြင့်တိုက်ခန်း” ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ တစ် ဦး ကအပေါင်ခံချေးငွေတစ်ခုအရစ်ကျအစီအစဉ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့အချိန်ကာလပါပဲ။ developer အနည်းငယ်သာနှစ်ပေါင်း ၅၁၀ နှစ်ရှည်အရစ်ကျအစီအစဉ်များရှိသည်။ အများစုသည်တစ်နှစ်အထိအရစ်ကျပေးသည်။ ဤရွေ့ကား ...
ဒါကဘာလဲကြွေးမြီပြန်လည်ဖွဲ့စည်း? အကယ်၍ သင်ကချေးငွေတစ်ခုရပြီးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်ပြန်ဆပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိလျှင်၊ သင်သည်ဘဏ်သို့ကြွေးမြီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင့်ကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်ကမ်းလှမ်းခံရနိုင်သည်။
"ဥယျာဉ်စာအုပ်တစ်အုပ်မှရောင်းချခြင်း" ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီလိုအိမ်မျိုးဝယ်သင့်လား။
"ဥယျာဉ်စာအုပ်တစ်အုပ်မှရောင်းချခြင်း" ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီလိုအိမ်မျိုးဝယ်သင့်လား။ "ဥယျာဉ်စာအုပ်" သို့မဟုတ် "အသင်းဝင်စာအုပ်" သည်ဥယျာဉ်၊ ဒက်ချာသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလူတစ် ဦး ၏အသင်းဝင်ကိုအတည်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။
အခမဲ့ရောင်းချခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ဥပမာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင်အခြားအရောင်းအ ၀ ယ်များရှိသည် - သင်ရောင်းသည်၊ အခြား ၀ ယ်သည်။ ... အခမဲ့ - မဟုတ်အရာဝတ္ထု (တိုက်ခန်း) အပေါ်ချမှတ်ထားသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အတူ encumbered ...
"ALTERNATIVE" ပါသောတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်ကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
"ALTERNATIVE" နှင့်အတူတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်ကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကို ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ =) သို့မဟုတ်သင်ဤတိုက်ခန်းကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကမ်းလှမ်းခြင်းခံရလိမ့်မည်။ မင်းပိုသဘောမတူဘူး ...
အသစ်သောအဆောက်အ ဦး သို့မဟုတ်အလယ်တန်းအိမ်ရာ! အသစ်အဆန်းအားလုံးကိုဝယ်လိုက်တယ် အခုဆိုရင်သင်ပြီးရင်အသစ်ပြီးတဲ့အိမ်တစ်အိမ်ကို ၀ ယ်ယူနိူင်တယ်၊ အလယ်တန်းအိမ်ထက်စျေးပိုချိုတယ်။ အားလုံးအခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်၊ ပထမမှာ၊ ဘယ်မှာနေမလဲ၊ အကယ်၍ …
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုရောင်းသည့်အခါအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်များအနေဖြင့်မည်မျှစိတ်ဝင်စားကြသနည်း။ ငါက 3% အဘို့အသဘောတူသည်ဘယ်ဒေသအပေါ်မူတည်။ ကျနော်တို့ 20000 ကနေ2ကနေရှိသည်! ဒါပေမယ့်ငါတို့ညှိနှိုင်းရမယ်! ငါတို့နှင့်အတူ - ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဟာကို ...
အိမ်တစ်အိမ်တွင်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရောင်းရန်မည်သည့်ထူးခြားသောကြော်ငြာများကိုသင်မှတ်မိသနည်း။ ငါမော်စကိုမြို့လယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုရောင်းမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် Tula ဒေသကမြို့ပြပုံစံအခြေချဖို့ငါပြောင်းမယ်။ ——————- ကလေးငယ်များမစားရသောဆေးလိပ်မသောက်သည့်မိသားစုတစ်စုအတွက်တိုက်ခန်းငှားရန် ...
ပုဂ္ဂလိကအိမ်၏စျေးကွက်တန်ဖိုးအများဆုံးကိုသင်မည်သို့တွက်ချက်နိုင်သနည်း။ ဒါကပိုပြီးလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူး .. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုရေးပါ .. ငါ့ပစ္စည်းကိုနှစ်ခါအကဲဖြတ်တယ် .. နားလည်တယ် .. ပိုလွယ်ရင် .. တောင်းဆိုမှုမှစျေးကွက်ပေါက်သည် .. သင်ကြော်ငြာမှယူသည်။
ရှယ်ယာဆောက်လုပ်ရေးဆိုတာဘာလဲ။ တန်းတူညီမျှမှုတည်ဆောက်ခြင်းဆိုသည်မှာအိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးတွင်သာတူညီမျှပါဝင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့သွားသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများသည်အစုရှယ်ယာရှင်များ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) မှရန်ပုံငွေများကိုဆွဲဆောင်ပြီး၊
အပေါင်စာချုပ်တစ်ခုတွင် "ချေးငွေ" ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
အပေါင်စာချုပ်တစ်ခုတွင် "ချေးငွေ" ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ (ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်တွင်ရှိလျှင်) ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ရှယ်ယာပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာသုံးပွင့်ဆိုင်ကန်ထရိုက်စာချုပ် (သို့မဟုတ်အိမ်ကိုငှားရမ်းထားပါက) ကိုရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ + ချေးငွေသဘောတူညီချက်။ ငှားရမ်းသူ ...
ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူ MGSN realtors? သင့်သူငယ်ချင်း၏အေးဂျင့်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ပိုကောင်းသည်။ ဥပမာ၊ မော်စကိုရှိအေဂျင်စီအများစုသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများ - အေးဂျင့်များသာမကဖောက်သည်များကိုပါလှည့်စားကြသည်။ ပြီးတော့ဘာလဲ ...
မှန်ကန်စွာ“ လာ” သို့မဟုတ်“ လာ” မည်သို့ရေးရမည်နည်း။
မှန်ကန်စွာ“ လာ” သို့မဟုတ်“ လာ” မည်သို့ရေးရမည်နည်း။ သာလာ - လာလာလာသို့မဟုတ်လာလာသလော ငါတို့ထဲမှမည်သူသည်စကားလုံးတစ်လုံးကိုရေးသားရန်သူမစဉ်းစားကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ပြောနိုင်သနည်း။
ငှားရမ်းသူကားအဘယ်သူနည်း အိမ်ငှားကငှားရမ်းတဲ့သူနဲ့တူတယ်။ အိမ်ငြားစာခLandပ်ြအိမ်ရင်ြ - ငှားရမ်းခပေးပ, ။ အိမ်ငှား / အိမ်ရှင် - ပိုင်ရှင်အိမ်ရှင်။ နှင့်…
ငှားရမ်းခဘယ်လောက်ပါလဲ? လစဉ်ငှားရမ်းခနှင့်ကွာခြားမှုရှိပါသလား။ ငှားရမ်းခကော်မရှင်လား အေးဂျင့်ကိုကော်မရှင်ကောင်းကောင်းပေးမလား။ ) အကယ်၍ အဲလိုဆိုရင်၊ ဒါကမင်းအတွက်ငွေပေးချေတဲ့ငွေပဲ။
realtors များအတွက်မေးခွန်းတစ်ခု။ မော်စကို၏ဘယ်ခရိုင်မှာငှားဖို့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုဝယ်ခြင်းငှါ။ စံပြတိုက်ခန်းများသည်မည်သည့်almostရိယာနီးပါးမဆိုမက်ထရိုမှလမ်းလျှောက်ရန်ဝေးသော်လည်းအလယ်ဗဟိုနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှနီးကပ်စွာနေခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
အပေါင်ခံအတိုးနှုန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၀ နှစ်အတွက်ရူဘယ် ၁၀၀၀,၀၀၀ နှုန်းကိုတစ်နှစ် ၁၂% နှုန်းနဲ့ယူပြီးဒါဆိုငါပေးတော့မယ်
အပေါင်ခံအတိုးနှုန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်သလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၀ နှစ်အတွက်ရူဘယ် ၁၀၀၀,၀၀၀ ကိုနှစ်စဉ် ၁၂% နှုန်းနဲ့ယူပါတယ်။ ဆိုလိုတာကကရူဘယ် ၁၀၀၀,၀၀၀ က ၁၂% ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအကြောင်းကိုထွက်လှည့်ပါလိမ့်မယ် ...
Belkin ၏“ The Lady Lady-Peasant” ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ပေးပါ။
Belkin ၏“ လူငယ်အမျိုးသမီးတောင်သူလယ်သမား” ဇာတ်လမ်း၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြပါ။ svom Tugilov ၏အိမ်ခြံမြေတစ်နေရာတွင်, အငြိမ်းစားအစောင့်တပ်သား Ivan Petrovich Berestov သည်နေထိုင်ပြီး၊ မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မျှမသွားခဲ့ပါ။ သူကအိမ်ထောင်စုထဲမှာပါဝင်နေသည်
53 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,851 စက္ကန့်ကျော် Generate ။